CENI : Amperinasa manomboka androany ireo mpikambana vaovao 9 mirahalahy
Loharano : Dépêche Informative Taratra
Tontosa tetsy amin’ny Fitsarana tampony Anosy androany 1 desambra 2021 ny fianianan’ireo mpikambana vaovao 9 mirahalahy mandrafitra ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (CENI). Lanonana ara-pitsarana, natrehin’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana IMBIKI Herilaza sy ireo tompon'andraikitra ambony avy amin’ny tontolon’ny Fitsarana, ny Parlemanta, ny Governemanta.
Mandray ny asany avy hatrany izy ireo taorian’ny fianianana androany ka hiroso amin’ny fananganana ny Birao maharitra.
Enin-taona tsy azo havaozina ny fe-potoana hisahanan'izy ireo amin’ny fikarakarana ny raharaham-pifidianana rehetra, ny fanavaozana sy fanatsarana ny lisi-pifidianana, fanovana na fananganana ny biraom-pifidianana manerana ny Nosy, fanentanana ny olom-pirenena handray anjara amin’ny fifidianana, fisorohana ny mety ho fifandirana mifandraika amin’ny fifidianana, ary fanatsarana ny famoahana voka-pifidianana sy fitondrana raharaha amin’ny Fitsarana mahefa.
Anisan’ny andraindraina amin’ny mpikambana vaovao amin’ny CENI, hoy ny filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena sady solombavambahoaka voafidy tao Ikongo, Atoa Razafitsiandraofa Jean Brunelle, ny fanamafisana ny fitokisan’ny vahoaka sy ny fanentanana mba hiakaran’ny taham-pahazotoan’ny olom-pirenena mifidy, izay nidina ambany tokoa tao anatin’ny fifidianana maromaro nifanesy teto amin’ny firenena.
Nanambara koa ny mpampaka-tenin’ny CENI teo aloha, Rakotondrazaka Fano, fa andrasana amin’ny mpikambana vaovao koa ny tokony hirosoana amin’ny fanatanterahana ny tolo-kevitra fanatsarana ny lalàm-pifidianana nentin’ny mpikambana teo aloha sy ny mpanara-maso ny fifidianana.
(Loharano : Dépêche Informative Taratra)